အဆိုပါစာရေးဆရာ - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ• Harold Waldwin Percival အကြောင်း
Harold ဒဗလျူ Percival
ဒီပုံမှန်မဟုတ်သောလူကြီးလူကောင်း, Harold Waldwin Percival နှင့်စပ်လျဉ်းကျနော်တို့ကသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူဒါစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားသူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာတည်ရှိသည်နှင့်မည်သို့သူကပြည့်စုံ။ သူကရန်စာရေးသူရဲ့စကားချီးထွက်ထောက်ပြအဖြစ် Percival ကိုယ်တော်တိုင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင်ဆက်လက်ရှိနေရန်ပိုမိုနှစ်သက် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny။ ဒါဟာသူတစ်ဦးကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုရေးသို့မဟုတ်ရေးသားထားသောအတ္ထုပ္ပတ္တိရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းကိုအပေါ်ရပ်တည်ရန်သူရေးထားသောစာငျြတယျ။ မိမိအရည်ရွယ်ချက်ကိုကသူ၏ကြေညာချက်များများ၏တရားဝင်မှုစာဖတ်သူကိုအတွင်းကိုယ်ပိုင်အသိပညာ၏ဒီဂရီနှင့်အညီစုံစမ်းစေနှင့် Percival ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရတာပါပဲ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, လူတွေသူတို့သည်အလွန်ကသူ၏အတွေးအခေါ်များကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, မှတ်စုတစ်ခုစာရေးဆရာအကြောင်းတစ်ခုခုသိလိုကြဘူး။ Percival 1953 အတွက်ကွယ်လွန်သွားသည့်အတိုင်းရှစ်ဆယ်လေး၏အသက်အရွယ်မှာယခုသူ၏အစောပိုင်းအသက်တာ၌သူ့ကိုသိတယ်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၏အသေးစိတျသိသူမှသာအနည်းငယ်သောသူသည်အသက်ရှင်တယောက်မျှမရှိ။ ငါတို့သည် သိ. လျက်ရှိသောသူတို့ကိုအနည်းငယ်အချက်အလက်များစုဝေးကြပြီ သို့သော်ဤပြည့်စုံအတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပေမယ့်အစားတစ်ဦးအကျဉ်းပုံကြမ်းမရရမည်ဖြစ်သည်။
Harold Waldwin Percival သူ့မိဘပိုင်စိုက်ခင်းပေါ်, ဧပြီ 15, 1868 အပေါ်ဗြိတိသျှအနောက်အင်ဒီး, ဘာဘေးဒိုးစ, Bridgetown မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကဘယ်သူကိုအဘယ်သူအားမျှသူ့ကိုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်, သားသမီးလေးယောက်၏တတိယဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအအင်္ဂလိပ်ဘာသာမိဘများ, အဲလစ်ဇဘက်အန်းတေလာနဲ့ James Percival, ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောခရစ်ယာန်တွေကိုဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျးသူတစ်ဦးအလွန်သူငယ်အဖြစ်ကြားသိရာ၏တာကျိုးကြောင်းဆီလျော်မထင်ခဲ့ဘူး, သူ၏များစွာသောမေးခွန်းများကိုရန်မကျေနပ်အဖြေတွေကိုရှိခဲ့သည်။ သူသိသည်နှင့်တစ်ဦးအလွန်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာသူက "ပညာရှိ" ရှာပြီးသူတို့ထံမှသင်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူမြားကိုအဲဒီမှာသူဖြစ်ရမည်ခံစားရတယ်။ နှစ်ပေါင်းလွန်သကဲ့သို့, "ပညာရှိသူများကို" ၏ကသူ၏အယူအဆပြောင်းလဲသွားပေမယ့်ကိုယ်ပိုင်အသိပညာရဖို့ရန်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်နျြရစျ။
Harold Percival တစ်ဆယ်နှစ်ရှိသောအခါ, သူ့ဖခင်ကွယ်လွန်သွားနှင့်သူ၏မိခင်ဘော်စတွန်အတွက်ဖြေရှင်း, United States ကိုပြောင်းရွှေ့, နောက်ပိုင်းတွင်နယူးယောက်စီးတီးရှိ။ သူ 1905 အတွက်သူမသေဆုံးခင်အထိအကြောင်းကိုတဆယ်သုံးနှစ်အဘို့မိမိအမိပြီးနောက်ကြည့်ရှုကြ၏။ တစ်ဦး avid စာဖတ်သူကိုသူအကြီးအကျယ် Self-ပညာတတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နယူးယောက်စီးတီးရှိ Percival Theosophy စိတ်ဝင်စားလာပြီး 1892 အတွက်စပါးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်း 1896 အတွက်ဝီလျံဆိုးကျိုးတရားသူကြီးများ၏သေသောနောက်အုပ်စုသို့ခွဲ။ Percival အကြာတွင် Madame Blavatsky နှင့်အရှေ့၏အရေးအသားကိုလေ့လာရတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသောစပါးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်သော, ဖွဲ့စည်း "ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. ။ "
1893 ၌၎င်း, နှစ်ကြိမ်လာမယ့်တဆယ်လေးနှစ်လွန်ကာလအတွင်း Percival "သိစိတ်ကိုမသိ" ဟုအစွမ်းထက်ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် noetic သစ္စာဉာဏ်အလင်းဖြစ်ခြင်း၏ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သညျ။ သူသိစိတ်ကိုမသိဖြစ်ခြင်းဒီတော့သတိခဲ့သူတဦးတည်းဖို့ '' အမည်မသိ '' ထုတ်ဖော်ပြသ "ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါကသိသောအရာကိုသူသိစိတ်ကိုမသိဖြစ်ခြင်း၏နိုင်စေရန်တစ်ခု၏တာဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တကယ်စဉ်းစားတွေးခေါ် "သူကအတွေ့အကြုံ၏တန်ဖိုးကသူကိုခေါ်မယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အားဖွငျ့ဆိုဘာသာရပ်အကြောင်းကိုသိရန်သူ့ကို enabled ခဲ့တာဟာဖော်ပြထား" ။ ဤအတှေ့အကွုံမြား Theosophy တွင်ပါရှိသောခဲ့သည်ထက် ပို. ထင်ရှားသောကြောင့် "ဟုသူကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုရေးဖို့နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်အတူဤအသိပညာဝေမျှချင်တယ်။
1904 မှစ. 1917 ရန်, Percival တစ်ဦးသည်လစဉ်မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေ, စကားလုံး, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ညီအစ်ကိုများထံအပ်နှံပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလှည့်ပတ်ခဲ့ခဲ့သော။ ထိုနေ့၏အတော်များများကထင်ပေါ်ကျော်ကြားစာရေးဆရာများမဂ္ဂဇင်းမှလှူဒါန်းခဲ့နှင့်ပြဿနာများကိုအပေါငျးတို့သအဖြစ်ကောင်းစွာ Percival တို့ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ပါရှိသော။ ဤရွေ့ကားအစောပိုင်းအရေးအသားသူ့ကိုအတွက်နေရာတစ်နေရာရရှိခဲ့ အမေရိကရှိအဘယ်သူသည်ကိုအဘယ်သူဖွင့်.
1908 ၌၎င်း, အနှစ်အရေအတွက်အဘို့, Percival တော်တော်များများနှင့်မိတ်ဆွေများကဥယျာဉ်ခြံ, လယ်ယာမြေနှင့်နယူးယောက်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စည်သွတ်ဗူးစက်ရုံ၏အကြောင်းကိုငါးရာဧကပိုင်ဆိုင်သောနှင့် operated ။ အိမ်ခြံမြေရောင်းချခဲ့သည်တဲ့အခါမှာ Percival သေးငယ်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားရှိခဲ့သောအကြောင်းကိုရှစ်ဆယ်ဧကထားရှိမည်။ သူကနွေရာသီလအတွင်းနထေိုနှင့်သူ၏စာမူအပေါ်အစဉ်အမြဲအလုပ်အားမိမိအချိန်မြှုပ်နှံနေရာအရပ်ဖြစ်၏။
1912 ခုနှစ်တွင်သူစဉ်းစားတွေးခေါ်သူ၏ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်အားဆံ့မယ်လို့ထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်များအတွက်ပစ္စည်းကိုဖျောပွစပြုလာသည်။ သူထင်နေချိန်တွင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်သေးသဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်အကူအညီများရရှိနိုင်ခဲ့အခါတိုင်းသူနှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာ။ 1932 အတွင်းပထမဆုံးမူကြမ်းပြီးစီးခဲ့ပါသည်; ဒါကြောင့်ကိုခေါ်ခဲ့သည် အတွေးအခေါ်၏ပညတ္။ သူကရှင်းလင်းနှင့်တည်းဖြတ်ရန်ကျော်နှင့်ကိုကျော်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အလုပ်လုပ်ဆက်ပြောသည်။ သူဟာသို့သော်ရှည်လျားသို့မဟုတ်အကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်ဤနက်နဲသောအရာတခုကိုစာအုပ်ဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်တိကျစွာလျောက်ပတ်စကားသည်သူ၏အလုပ်ကိုဝတ်ဆင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ကြဘူး။ ၎င်း၏ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny နှင့်နောက်ဆုံးတွင် 1946 ပုံနှိပ်။
ဒါကတစျထောငျ-စာမျက်နှာလက်ရာသုံးဆယ်လေးနှစ်တစ်ကာလအတွင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်က Man နှင့်ပြည့်စုံစေ့စပ်အသေးစိတ်၌သူ၏ကမ္ဘာ၏ဘာသာရပ်ဖုံးလွှမ်း။ နောက်ပိုင်းတွင်, 1951 အတွက်သူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ လူနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေး နှင့် 1952 အတွက်, ပန်းရန်နှင့်၎င်း၏သင်္ကေတ နှင့် ဒီမိုကရေစီိံငြ်ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ Is။ အဆိုပါသုံးသေးငယ်စာအုပ်များပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny နှင့်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်အရေးပါမှုကိုရှေးခယျြဘာသာရပ်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်။
1946 ခုနှစ်, Percival, အဆွေခင်ပွန်းနှစ်ယောက်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်သူ၏စာအုပ်များဖြန့်ဝေထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်း Percival နောက်ထပ်စာအုပ်တွေများအတွက်စာမူပြင်ဆင်ထားရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်သူကအမြဲသတင်းထောက်များအနေဖြင့်အများအပြားမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မိမိကိုမိမိရရှိနိုင်ပါစေတော်မူ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ, Inc ကမ္ဘာ၏လူလူသိများ Harold ဒဗလျူ Percival ကရေးသားအားလုံးစာအုပ်တွေစေရန်နှင့်လူသားအားမိမိအမွေ perpetuated လိမ့်မယ်လို့အာမခံထားဖို့ 1950 အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ Percival နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ, Inc အားမိမိစာအုပ်တွေအားလုံးအတှကျအဆိုပါမူပိုင်ခွင့်တာဝန်ပေး
မတ်လ 6, 1953 တွင်, Percival ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကသူ့ရှစ်ဆယ်-ပဉ္စမမွေးနေ့မတိုင်မီပျောက်နယူးယော့ခ်စီးတီးရှိသည့်သဘာဝအကြောင်းတရားများလွန်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ဆန္ဒကိုအညီ, မီးသဂြိုလ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမသူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့လူ့ဖြစ်လျက်ရှိတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးကြောင်းခံစားခြင်းမရှိဘဲ Percival တွေ့ဆုံရန်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်။ အမှုတော်တို့ကိုလူ့၏တစ်ဦးမြင့်မားစစ်မှန်တဲ့ပြည်နယ် addressing အတွက်အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အလားအလာရှိသောကိုယ်စားပြုသည်။ လူသားတို့အားမိမိအလှူငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လာယဉ်ကျေးမှုအပေါ်တစ်ဦးအထိသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။